Concrete Batching Plant, simenitra Mixer, mivaingana Boom Pump Truck - Conele Group
3 famokarana bases
Ny famokarana base no misy ao amin'ny South China, Atsimo Andrefana Avaratra Shina sy China.Convenient ranomasina sy ny lalamby no miantoka ny fitaterana soa indrindra.
15 karazana fitaovana
Mandrakotra mivaingana mampifangaro pumping fametrahana fitaovana sy ny fanodinana, safidy bebe kokoa ho anao.
25 taona 'traikefa
Naorina tamin'ny 1993, natokana ho an'ny R & D, ny varotra sy Ankehitriny-varotra ny simenitra fitaovana.
28 sampana orinasa
Sampany samy hafa mifantoka amin'ny R & D sy ny famokarana ny singa samihafa, hahazoana antoka fa ny hatsaran'ny singa tsirairay eo amin'ny ambaratonga orinasa tsy miankina sy azo amidy, ary maty tao an-tsena.
Ny orinasa matihanina zazavao sy mamboly talenta sy miangona maharitra ny fampandrosoana ny orinasa.
Fanompoana namboarina mampiseho ny hery ara-teknika sy ny tsena acceptance.Almost ny zava-drehetra azo namboarina araka ny zavatra ilaina, mandrakotra faritra anaty marika fifidianana, ravaka ivelany, etc.OEM sy ODM no nanome.
Alohan'ny dia fahazoan-dalana mankany fivarotana fitaovana tsara araka izay ilain'ny mpanjifa sy ny hafa ny toe-javatra azo ampiharina mampiasa ny traikefa sy matihanina knowledge.After fivarotana, ny injeniera ho azo fametrahana debugging sy ny fampiofanana ao amin'ny aterineto manokana, na an-toerana.
Factory mivantana vidiny
Mitady rafitra agents.The fahafahana misafidy dia lehibe paikady ny vondrona mba hametraka ny world.we'll manontolo hamantatra ny tsara indrindra mba hanohana sy hiaro ny tombontsoan'ny ny agent.lower vidin'ny, tsara mpanjifa loharanon-karena, dokam-barotra maimaim-poana fampirantiana fampiroboroboana etc.
Self rehefa niakatra fametrahana boom